कसरी बनाउनुहोस् एक घर बनाउने Trebuchet catapult
पक्कै पनि तपाईंलाई मनपर्दछ catapults, सबैजनाले मनपराउछन् :) र यदि हामी उनीहरूलाई अझ ठूलो बनाउन सक्दछौं।
तपाईंले छविमा देख्नुहुने योaहो trebuchet catapult। सयौं छन् तरिका यो catapult गर्न। विशाल मोडेलहरूबाट, एक प्राचीन मध्यकालीन महल आक्रमण हतियारको रूपमा सानो र सुपर घरेलु मोडेलहरू
कसरी क्रिस्टल एरहेड बनाउने
सिद्धान्त धेरै सरल छ, यद्यपि मलाई लाग्छ कि अभ्यासमा यो धेरै जटिल हुनेछ।
यो प्रविधीले हामीलाई मार्गको सम्झना गराउँछ प्रागैतिहासिकमा एरहेडहरू प्राप्त गर्न ढु stones्गा कुर्नुहोस्। र यो इमेजसँग धेरै मिल्दो छ जुन हामीलाई ए obsidian एरोहेड ज्वालामुखी गिलास भनिन्छ।
आकारको आकारका लागि गिलासको बोतलहरूको आधारमा घुमावहरूको लाभ लिनुहोस् एरहेड। तपाईंले आधारहरू न त धेरै कन्भेभ, न धेरै उत्तलको साथ बोतलहरू छान्नु पर्दैन।
तरकारी फाइबरको साथ डोरी कसरी बनाउने
मलाई यो भिडियो मनपर्‍यो जहाँ उनीहरू सब्जी फाइबरको साथ डोरी कसरी बनाउने भनेर वर्णन गर्छन्। यो एक होईन ... पढ्न जारी राख्नुहोस्
बाँस एरो कसरी बनाउने
केही समय अघि हामीले देख्यौं कसरी धनु बनाउने र हामीसँग पोष्ट लेख्नका लागि केहि धेरै हेरिएको मोडलहरू छन्।
तर त्यो धनु हराएको छ तीरहरू। आजकल ती सामान्यतया कार्बन फाइबर रडले बनेको हुन्छ, तर यहाँ हामी तपाईंलाई देखाउन चाहन्छौं बांसको खम्बासँग पारंपरिक एरो कसरी बनाउने.
पिंग पong्ग बलहरू सुरू गर्ने बन्दुक कसरी बनाउने
हामीले पहिले नै एक प्रकारको देख्यौं बन्दुकले पिing्गपong्ग बलहरू सुरू गर्दछ। तर आज अधिक पिस्टल ढाँचा हो, ehehe
छविले यसलाई कसरी स्पष्ट रूपमा स्पष्ट पार्दछ, त्यसैले म अधिक जोड दिदिन। तपाईंको कामलाई सजिलो बनाउन मापहरूको साथ मात्र छवि छोड्नुहोस्।
यो लेखमा हामी सिर्जना गर्ने बारेमा कुरा गर्नेछौं कार्यालय हतियार u कार्यालय हतियार। हतियारहरू जुन सामान्य कार्यालय वस्तुहरू, कागज क्लिपहरू, रबर ब्यान्डहरू, पेन्सिलहरू, पेन्सिल शार्पनरहरू, इत्यादिका साथ सिर्जना गर्न सकिन्छ। ध्यान दिनुहोस्, यद्यपि तिनीहरू हानिरहित देखिँदैनन्, यी केही उपकरणहरू खतरनाक हुन सक्छ। ठूलो सावधानीका साथ ह्यान्डल गर्नुहोस्।
सावधानी: अन्य कार्यालय हतियारहरू जस्तै यो पनि धेरै खतरनाक हुन सक्छ र नोक्सान निम्त्याउन सक्छ। सावधानीका साथ प्रयोग गर्नुहोस्।
क्लिपको साथ क्यापलप्ट
हामी यसको सेक्सनको साथ शुरू गर्दछौं कार्यालय हतियार o कार्यालय हतियार.
यस अवस्थामा हामी देखाउँदछौं कसरी क्लिपहरू र रबर ब्यान्डको साथ एक क्याटपलेट बनाउने.
यो साधारण गुलेल यो दुई भाग बाट बनेको छ। एकातिर समर्थन र अर्कोतर्फ काउन्टरवेट, जुन एक लोचदार ब्यान्ड द्वारा सक्रिय हुनेछ
दुई सरल छविहरूमा समर्थनको निर्माण हेरौं
एक क्रसबो पेन्सिल कसरी बनाउने
हामी यो चाखलाग्दो मोडेललाई निर्माण गर्नमा छाड्दछौं पेन्सिलको साथ कार्यालय क्रसबो, कलम र7रबर ब्यान्ड।
यो वर्गीकृत गरिएको अर्को कलाकृति हो कार्यालय हतियार.
होममेड कम्प्रेस गरिएको एयर राइफल
अर्को दिन हामीले घरै बनाउने राइफललाई चरण-चरण कसरी बनाउने भन्ने बारे ट्यूटोरियलको भिडियो छोडेका छौं
आज हामी केहि रोचक भिडियोको साथ विस्तार गर्दछौं
राइफलको थ्रीडी मोडल।
तीन भागहरूमा कम्प्रेस गरिएको एयर राइफलको निर्माण: